Igbo Mass Readings for Friday of First Week of Lent
FRAIDEE IZU NKE MBU N’OGE AHỤHỤ KRISTI
Dinwenu, biko mee ka emume lenti ti anyį na-eme nyere anyi aka inwoghari onwe anyi ma kwadokwa anyi isonye n’emume nke onwu na mbilite n’onwu nke Kristi, Onye Gi na Ya di ndu na-achieze n’idiko n’otu nke Mmuo Nso, otu Chukwu site n’uwatuwa niile. Amen.
Ihe Ogugu nke mbu: 18:21-28
Ihe ogugu ewetara n’akwukwo onye Amuma Izikel
“O buru na ajo mmadu atugharia site na mmehie niile o mere, bia debe ihe m nyere n’iwu, na-emekwa ihe ziri ezi na ihe di mma, o ga-adiriri ndu; o gaghi anwu. O nweghikwa mmehie obula o mere nke a ga-echeta iji megide ya. O ga-adi ndu maka eziomume niile nke o mere.
O na-amasi m bu onwu nke onye ajoomume? O bu Yahweh Chineke na-ekwu, karia na chighariri n’uzo ya wee di ndu? Ma mgbe onye eziomume hapuru eziomume ya, bia mee ihe ojoo, na-emekwa ihe aru niile bu nke onye ajo mmadu na-eme, o ga-adi ndu? Onweghi iheoma niile o mere nke a ga-echeta; o ga-anwu n’ihi akwudosighi ike ya, na mmehie niile o mere. “Ma unu na-asi ‘Uzo nke Yahweh ezighi ezi! Gee nti ugbu a, ulo Izrel: O bu na uzo m ezighi ezi? O bu na o bughi uzo unu bu nke ezighi ezi? Mgbe onye eziomume si n’eziomume ya chegharia, mebe ihe ojoo, o ga-anwu maka ya; o ga-anwu maka ihe ojoo nke o mere. Ma mgbe ajo mmadu si n’ajo omume niile o mere chegharia bia mee ihe ziri ezi, a ga-azoputa ndu ya. N’ihina o chere echiche wee si na mmehie niile nke o mere chigharia, o ga-adiriri ndu, o gaghi anwu.
ABUOMA NA AZIZA: Ps:130: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.
Aziza: O buru na gi, O Onyenweanyi, na-agu ajo omume anyi onu, Onyenweanyi, onye ga-eguzo.
N’ugbu mmiri ka m na-akpoku gi, O Onyenwenanyi,
Onyenweanyi, nuru akwa enyemaka m na ebe,
che nti n’aririo m na-ario. Az./
2.Ọ buru na gi, O Onyenweanyi, na-agu ajo omume anyi onu,
Onyenweanyi, onye ga-eguzo.
Mana i na-agbaghara anyi,
n’ihi nke a, anyi na-asopuru gi. Az./
Ana m eche Onyenweanyi,
mkpuruobi m na-eche ya,
na nkwa ya ka m nwere nchekwube.
Mkpuruobi m na-eche Onyenweanyi,
karia otu ndi nche si eche ututu. Az./
O Izrel, nwee nchekwube n’Onyenweanyi!
N’ihi na ihunaanya Onyenweanyi di okpu,
n’ime ya ka nnukwu nzoputa di!
O ga-azoputa Izrel na njo ha niile. Az./
MBEKU: Ez: 33, 11
Agaghi m enwe añuri n’onwu onye ajo omume, kama ka o si na njo ya puta ma di ndu. R./
Jesu gwara ndi n’eso uzo ya si: “beluso ma eziomume unu okariri nke ndi ode akwukwo na nke ndi Farisii, unu agaghi abata n’alaeze eluigwe.”Unu anula na agwara ndi mgbe ochie si, unu egbula ochu. Onye obula gburu ochu a ga ekpe ya ikpe. Ma mu onwe m na-agwa unu si, Onye obula nke na-eburu nwanne ya iwe n’obi, a ga ama ya ikpe. Onye obula kpariri nwanne ya ga-aza aziza n’uloikpe. Onye obula kporo nwanne ya onye nzuzu!’ ga-aba n’okummuo.
Ya bu o buru na i na-eweta onyinye gi n’ekwu nchuaja, ma cheta n’ebe ahu na gi na nwanne gi adighi na mma, hapu onyinye gi n’ihu ekwu aja. Buru uzo gaa ka gi na nwanne gi mezie. Mgbe unu mezichara, bia, ka i nye onyinye gi. Mee ka gi na onye gbara gi akwukwo kpezie osiso tupu unu agaruo n’ulo ikpe, ka o ghara inyefe gi n’aka onye okaikpe, onye okaikpe e duru gi nye n’aka ndi nche, ndi nche ewee tinye gi n’ulo mkporo. N’eziokwu agwa m gi, i gaghi esi ebe ahu puta ruo mgbe I kwuchara ugwo gi niile.
Dinwenu, Onye ebere, n’obioma Gi nara onyinye ndi a. Mee ka ha ritere anyi ike nzoputa Gi. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.
Dinwenų, mee ka Sacramenti nke a I nyere anyi zoputa anyi n’uzo nke njo ma wetara anyį ndu ohuru. Mee ka Eucharistia nke a dubata anyi na nzoputa ebighi ebi. Mezuoro anyi ihe ndi a site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.
Igbo Mass Readings for Saturday of First Week of Lent
Igbo Mass Readings October 19 2020 Mọndee Izu Iri Abụọ na Itoolu n’Oge
Bylectionary	 December 11, 2020 December 11, 2020
Read More Igbo Mass Readings October 19 2020 Mọndee Izu Iri Abụọ na Itoolu n’OgeContinue
Igbo Readings for June 27, 2020, Satoodee
Read More Igbo Readings for June 27, 2020, SatoodeeContinue
Igbo Mass Readings for Tuesday Izuukwu nke Mbilite N’onwu Kristi
Bylectionary	 November 7, 2021 November 23, 2021
Read More Igbo Mass Readings for Tuesday Izuukwu nke Mbilite N’onwu KristiContinue
Igbo Readings for July 4, 2020, Satoodee Izu Nke Iri Na Ato N’oge Nkiti
Bylectionary	 July 2, 2020 July 10, 2020
Read More Igbo Readings for July 4, 2020, Satoodee Izu Nke Iri Na Ato N’oge NkitiContinue
Igbo Mass Readings for Friday of the Third Week of Lent
Bylectionary	 October 17, 2021 October 17, 2021
Read More Igbo Mass Readings for Friday of the Third Week of LentContinue
Igbo Mass Readings for Saturday of Fifth Week of Lenti
Read More Igbo Mass Readings for Saturday of Fifth Week of LentiContinue